DHAGEYSO:- Shacabka Puntland oo Baaq deg deg ah looga diray arinka Tukaraq & dib Uxureynta Tukaraq oo …. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA DHAGEYSO:- Shacabka Puntland oo Baaq deg deg ah looga diray arinka Tukaraq & dib Uxureynta Tukaraq oo ….
DHAGEYSO:- Shacabka Puntland oo Baaq deg deg ah looga diray arinka Tukaraq & dib Uxureynta Tukaraq oo ….
Siyaasi Cabdi-Daahir Yuusuf Yeey oo kamid ahaa raggii u tartamay doorashadii Madaxweyne-nimada Puntland sannadkii 2014-kii, ayaa ka hadlay howlgalka dib u xoreynta gobalka Sool oo uu sheegay in ay diyaar u yihiin Shacabka iyo maamulka Puntland.
Siyaasigan oo kusugan dalka Mareykanka, lana hadlay raadyaha maxaliga ah ee Puntland FM , ayaa kusifeeyey qabsashadii Tukaraq xaalad abuur iyo colaad kicin ay sameysay Somaliland, ayna tahay in talaabadeeda laga qaado kuwa soo xadgudbay.
Mr, Yeey ayaa sheegay in looga baahan yahay maamulka Puntland in ay gutaan waajibaadka Dastuuriga ah ee ay u dhaarteen, gaar ahaana arrimaha ku saabsan Difaaca dalka oo waajib ah.
Siyaasigu wuxuu cadeeyey in ay shacabka Puntland doonayaan in dib loo soo celiyo deegaanada ka maqan gacanta maamulkooda, wuxuun sheegay in dadka kusugan magaalada Laascaanood ay diyaar u yihiin sidii ay u taageeri lahaayeen howlgalka dawladda Puntland.